Andro henjana no nisy ahy. Nijery herinandro mafy aho. Mety efa iray volana izay. Nila aingam-panahy aho. Androany dia nandinika sary vitsivitsy aho avy eo Tom Peters, ireto misy toerana tena tianao zaraina:
Omeo ny mpiasanao isaky ny mahita fahombiazana, ary raha tsy mahomby izy ireo dia omeo fotoana hahombiazany any an-kafa. Indraindray izany dia midika fandroahana azy ireo. - Tsy tadidiko hoe iza no nilaza tamiko an'io, saingy nifikitra tamiko io.